Fampiharana fampiharana HIIT tsara indrindra ho an'ny flexibility - Method Makia
Fampiofanana matanjaky ambony ao an-tokantrano ho an'ny fahaleovan-tena sy ny fahalefahana
Tena zava-dehibe ny fampiofanana amin'ny fiofanana. Rehefa nandeha ny fotoana dia mihamitombo ny fahalalana momba ny tombontsoa amin'ny fampiofanana momba ny fampitaovana. Ny fiantohana tsara dia miaro anao amin'ny ratra ary manatsara ny fahasalamanao sy ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny - ludoteka milano e provincial parks.
Inona no fampiofanana amin'ny finday? Iza no afaka mandray soa avy amin'izany?
Ny Metia Makia dia mikasika ny Mobility sy Flexibility. Ny flexibilité dia midika hoe ny ampahany amin'ny fivoahan'ny fahana ny fisian'ny fiaraha-mikorana. Ny fidiran'ny finday dia ny fitantanana sy ny fanaraha-maso ny hetsiky ny sehatra iraisam-pirenena. Misy olona izay tena mavitrika, saingy mety mbola sarotra ho azy ireo ny manao fihatsaram-belatsihy madio amin'ny vatany. Ny maha-mavitrika sy ny fananana fifandraisana tsara dia zavatra roa samihafa.
Mandray soa amin'ny olona rehetra ny fiofanana
Afaka manampy ara-bakiteny ny fampiofanana maotera. Midika izany fa mendrika ny manao fiofanana momba ny fifindra-monina mifanaraka amin'ny tanjonao manokana. Ohatra, raha te ho tonga mpitsangatsangana kilasy lehibe ianao dia tsy mahasoa loatra ny mampihatra loatra. Ny fihenanam-pitenenana matetika sy be dia be ny fihenan'ny elasticité. Fa ao amin'ny Method Makia, ny fahafahana manao sivana dia hanampy anao hahatratra ny hetsika mahery.
Eny tokoa, ny mpitsikilo dia asaina tsy manao fihetsika mihelina ary mifantoka amin'ny fitazonana ny hozany "misokatra" amin'ny fanatanterahana fiatoana. Ny fitomboan'ny dinamika, ny fitomboan'ny isometrika, ary ny fampifangaroana amin'izany dia fomba mahomby indrindra hampiroboroboana ny fahaiza-manaon'ny vatan'ny olona. Tsy voatery mampitombo ny halavan'ny hareza foana izy ireo, fa manitsy kosa ny fanitsiana, ny fanehoan-kevitra, ary ny fikorotanana.
Ny fitohanana mampihetsi-po dia fihazakazakazakan-dàlana mifehy ny fihetsiketsehana, e. h. , henjana lalina ara-teknika mifantoka amin'ny vatan'ny olona. Ny fitomboan'ny isometrika dia fitomboan'ny vokatry ny asan'ny muscle, e. h. , rehefa mitsangana eo amin'ny toerana misy fizahan-tavan'olona. Ireo teknika fampiarahana ireo dia ahitana ny fomba fitsaboana fientanam-po sy ny fihenjanana-fialan-tsasatra + mihazona mafy.
Ny fitomboan'ny fivoahana dia ny iray izay manampy ela kokoa ny hozatra. Tokony ho "misokatra tsara" ihany anefa ny hozak'izy ireo, mba hahitana vokatra tsara. Afaka mihazona "ny misokatra" ny hozatra, na dia manao fanatanjahan-tena mafy aza amin'ny alalan'ny fampiharana fampihetseham-batana.
Ny fihazonana mandalo dia midika hoe miala sasatra raha eo am-pitoerana, e. h. , mijoro sy manongilana. Raha ny marina dia tokony hampidirina amin'ny fampiofanana ny famolavolana amin'ny laoniny raha toa ka mikasa ny handroso bebe kokoa ny sainao.
Ny risika mifandraika manokana amin'ny fitongilanana lava (30 + sec) dia ny fihenan'ny fihenan'ny hery ny fihenan'ny hery ary izany dia miteraka fifehezana amin'ny hetsika, indrindra eo amin'ny teboka faran'izay hetsika. Rehefa mitranga izany, mitombo ny loza mety hitera-doza rehefa mivelatra sy amin'ny fihetsiketsehana rehetra izay alehan'ny hetsika na mety handeha, akaikin'ny teboka farany. Noho izany antony izany dia tokony hifanaraka amin'ny fampiharana ny fampivoarana ny fizotran'ny fihetsiketsehana. Ity fitsipika playa ity dia andraikitra goavana eo amin'ny Method Makia izay mila ny hetsika maromaro sy ny fanaraha-maso tsara.
Fampiofanana matanjaka mampifandray ny hetsika feno
Indraindray ny fampivelarana ny fahaleovan-tena dia mety hanampy amin'ny fampiofanana matanjaka amin'ny asa fanatanjahan-tena. Ohatra, ny hozatry ny infraspinatus amin'ny soroka dia matetika amin'ny toe-javatra marefo ka mety ho voafetra ny fihetsiketsehana.Raha izany no mitranga, rehefa manatona ny tohotra ny tongony dia tsapan'izy ireo fa efa miha-akaiky ny toe-javatra tsy voafehy ary "nahatratra ny fihenana".
Tokony hanomboka fampihetseham-batana mora, na dia noho ny fandrosoana ihany aza! Rehefa mandre ny teny hoe "mihazakazaka" ny olona sasany, dia mampitony azy amin'ny alahelo sy ny fahaverezana.
Na izany aza dia tsy tokony hampijaly ny fampiasana ny fampiasana fitaovana, ary tsy voatery ho zava-dratsy izany. Raha tsy maintsy manery ny tenanao hanao zavatra ianao dia mahazo ny hafatra momba ny loza atrehanao ny vatanao ary tsy tsara ny vokatra. Rehefa manao zavatra mandroso ianao, dia tokony hiezaka hifantoka amin'ny fitadiavana toeram-pitsangatsanganana, ary rehefa mazoto mivezivezy mazoto mivezivezy dia tena manan-danja.
Ny fampiofanana momba ny Metia Makia dia ahitana fiofanana mivezivezy malalaka. Amin'ny lafiny maro, ny fampiroboroboana ny hery dia mampivelatra ny fahaleovantena amin'ny tenany manokana, fa azo atao tsara kokoa izany amin'ny alalan'ny fampiharana fampihetseham-batana.